Keele University - Study in United Kingdom. EducationBro Magazine
Keele University Details
Country : Boqortooyada Ingiriiska
City : afka
gaabinta : KU
aasaasay : 1949
Ardayda (qiyaastii.) : 1000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Keele
Qor at University Keele
Waxaan nahay University Keele, waana kala duwan. Aasaasay ka badan 60 sano ka hor on aaminsan in aan la kulmo baahida nooc cusub oo bulshada, dhaqaalaha iyo dunida, mabaadi'da our resonate hadda in ka badan abid.
naalaa 600 acres of baadiyaha qalbiga UK, badan ee ardayda oo tiro ka mid ah shaqaalaha live, iyo sidoo kale waxbarashada iyo shaqada halkaan. Waa campus weyn laakiin bulshada yar iyo magalo. Waxaan ku shaqeeyaan on qiyaasta a aadanaha, bixinta dadka meel bannaan oo ku fekero oo wax badan in la sameeyo, la soo diyaariyeen ballaaran uu ka mid ah kooxaha, bulshada, hawlaha iyo fursado tabarucid.
Waxaan israac falan ugu sareysa aad u of sahan qanacsanaanta ardayga. Tani waa sababta oo ah waxay ka badan cagaaran iyo la jecel yahay, waxaa sidoo kale ay meel ka mid ah cilmi-baarista iyo tacliin heer sare. Haddii ay Health, Humanities iyo Social Sciences ama Sciences Dabiiciga ah, wax kasta oo meesha aad waxbarasho, waxaan samatabbixin waayo-aragnimo waxbarasho oo gaar ah oo caalami ah. Waxaan baro kooxo yar yar, siiyaan mid-ka-mid u helaan tacliinta iyo qiimeeyo tayada cilmiga sida aadka sida cilmi.
barnaamijyada Our degree iyo aasaaska sano mar walba waa ay adag distinctively, dabacsan iyo kobcinta aqoonta balaadhan ku salaysan. Our hab maadooyinka iyo maaddooyin kaliya ma waxtara waxbarashada cajiib ah laakiin awoodaha cilmibaarista dunida caan ka. All of kaas oo sidoo kale ka dhigan tahay waxaan samatabbixin saameyn weyn iyo qiimo ka our cilmi-baarista iyo cilmiga, mid caalami ah iyo sidoo kale gudaha.
Waa yaab yar ardayda iyo Qalinjabiyeyaasha waa shaqsi sida University laftiisa: horusocod ah oo ku dhammaystirmi, cad oo ku saabsan cidda ay yihiin iyo waxa ay doonayaan in ay noqdaan, qalabaysan in ay la kulanto qaar ka mid ah caqabadaha waa weyn ee hadiyado maanta dunida, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee bulshada iyo ganacsiga.
Keele waa in North Staffordshire kalabadhkeeda u dhexeeya Manchester iyo Birmingham. University waa kur Cafiyi magaalada Newcastle-hoos-faraxnay (laba mayl Keele) Stoke-on-Trent (iyo meelaha ugu muhiimsan shopping Hanley) kaliya labo miles dheeraad ah.
Waxaa jira nolol kobcaya arday wareegsan campus iyo tiro balaadhan oo ah makhaayad-baararka, maqaayado iyo masraxyada ee Newcastle iyo kooxo Hanley.
Theatre ku caashaqa oo wuxuu ku raaxaysan doonaa Vic Cusub ee Newcastle iyo Regent ee Hanley, halka filimada ugu dambeeyay waxaa lagu muujiyey at shineemo multi-screen ee Newcastle. theme park weyn ee The UK ee, Alton Towers, waa ku dhawaad 45 daqiiqo ka University ee. Degmadu waxay u qurux badan Fiinta waa kaliya 20 miles ka Keele iska. Eeg Degmada Fiinta- wax si aad u aragto oo aad samaysid wixii macluumaad dheeraad ah.
meel dhexe Keele ayaa la micno ah waa ay fududahay si aad u hesho meel kasta oo dalka ka, la M6 iyo xadiidka xiriir dhow dhow dahay. Manchester iyo Birmingham yihiin kasta drive saac ee iska, halka London waa 90 daqiiqo oo tareen.
Keele waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah koorasyo ​​inuu kugu fadhiisiyo on track ee aad mustaqbalka. Waxaan ku siin taageero fiican iyo xarumaha loogu tala galay ardayda, labada tacliin ahaan iyo bulsho ahaanba.
koorsooyinka Our bixiyaan:
Dhiirrigelin waxbaridda iyo waxbarashada iyo xirfadaha aad mustaqbalkaaga.
waxbaridda tayada sare ee guud ahaan ballaaran oo kala duwan maadooyinka tacliinta iyo xirfadaha.
Fursadda in la isu geeyo danahaaga iyo inaad horumariso xirfadaha dhex darajo kala our Dual Sharfidu – iyadoo in ka badan 500 isku maado la heli karo.
Waxaan sidoo kale bixiyaan darajo xirfadeed Single Sharfidu ee Medicine, Caafimaadka, Sharciga iyo ganacsiga maadooyinka.
Iyada oo soo jiidasho ah, campus saaxiibtinimo, Keele waxay bixisaa waayo-aragnimo ah arday aad u gaarka ah:
madadaalo wanaagsan in Ardayda ka’ Midowga habeen kasta ee toddobaadka.
Qalin tago Keele qaar ka mid ah heerarka ugu fiican ee guul waxbarasho iyo shaqo ee UK
Waa farqiga Keele ah.
Kulliyadda Humanities iyo Social Science
School Management Keele
Unit Learning Luuqada
Media, Isgaarsiinta iyo Dhaqanka
Music iyo Music Technology
Politics, Xiriirka Caalamiga ah iyo Philosophy
Cilmiga Bulshada iyo Siyaasadda Dadweynaha
Kuliyada Daawada iyo Caafimaadka Sciences
Caafimaadka iyo Rehabilitation
Nursing iyo ummulisooyinka
Kuliyadda Sayniska Dabiiciga ah
Chemistry iyo dawo Chemistry
Kombuyuutarada iyo Xisaabta
Juqraafiga, Cilmi dhul iyo Bay'ada
Physics iyo jaamacadaha UCLA
Sciences Jirka iyo dhuleed
University Keele la aasaasay 1949 sida College University of North Staffordshire, at hindisaha of A D Lindsay, markaas Professor of Philosophy iyo Master of Balliol College, Oxford. Lindsay ahaa doode xooggan ee waxbarashada dadka waaweyn-xoogsatada, kuwaas oo markii hore soo jeediyay in a “Jaamacadda dadka” khudbad uu ka the Workers North Staffordshire’ Ururka Waxbarashada ee 1925.
On 13 March 1946, Lindsay u qoray in Sir Walter Moberly, guddoomiyaha guddida Deeqaha Jaamacadda (UGC), soo jeediyay abuuritaanka kulliyad “on khadadka cusub”. dhaqanka la aasaasay ahayd kulliyadaha cusub in la bilaabay aan awoodaha degree-abaaliyo, halkii qaadashada darajo dibadda ee Jaamacadda London. daayacay, Lindsay doonayay in “takhaluso degree London ee dibadda”, halkii la xirrira kulliyad maamulka laga bilaabo si ay u dejiyaan ay manhaj u gaar ah, laga yaabee simaha hoos xayaysiinta ee jaamacadda la aasaasay. Lindsay ayaa sidoo kale qoray in Ku-xigeenka Chancellor of Oxford, fikirayo codsanaya xayaysiinta kaliya sida.
Guddiga An shidaal la aasaasay by Stoke-on-Trent Council City, shir Lindsay oo ay taageerayaan Aaabaheed Thomas Horwood, Vicar Etruria iyo hoggaamiyaha kooxda shaqada on Golaha Magaalada. Iyadoo xaqiijisatay maalgelinta dawladda ka UGC ee January 1948, Guddiga helay Keele Hall, guriga haybad badan oo ku yaalla Newcastle-hoos-faraxnay, ka milkiilaha, Ralph Sneyd. Hall The, joogitaanka ay isirka qoyska Sneyd ah, ayaa hore requisitioned by Office War loo isticmaalo military intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, oo waxaa lagu bixisey la bulk of estate Sneyd iyo tiro ka mid ah dhismayaasha prefabricated taagay by ciidamada, waayo, wadarta oo ah £ 31,000.
graduate ugu horeeya by default ahaa George Eason soo bartay Xisaabta at University Birmingham helo BSc ah 1951. Waxa uu helay uu MSc in 1952 ka Keele.
graduate ugu horeeya waxbarashada si buuxda ugu Keele jiray Margaret Boulds in 1954, qalin ee Falsafadda iyo English. joogto ah u koraya, kulliyadda jaamacadda loo dalacsiiyay heerka jaamacadeed ee 1962, hesho a charter cusub Royal bishii January ee sanadkii in, iyo dhaqmaadka magaca Jaamacadda Keele. Tani ayaa weli magaca rasmiga ah, inkastoo University Keele hadda waa isticmaalka maalin walba. Waxaa la aqoonsaday sida mid ka mid ah jaamacadaha galaas Plate.
In 1968, Guddiga Royal ku saabsan Waxbarashada Caafimaadka (1965-68) soo saaray ku “Todd Report”, taas oo loo arko suurtagalnimada of a dugsiga caafimaadka la aasaasay at Keele. Waxaa loo maleynayay in in North Staffordshire noqon lahaa goob wanaagsan, isagoo ah dadka degaanka ee waaweyn iyo isbitaalada dhowr waaweyn. Waxaa la tixgeliyaa in qaadashada ugu yaraan 150 ardayda sanad walba lagama maarmaan tahay in la sameeyo dugsiga caafimaad dhaqaale iyo waxbarasho-gal. Si kastaba ha ahaatee, Jaamacadda waxay ahayd waqti aad u yar si ay u taageeraan dugsiga caafimaadka ee size this. Si kastaba ha ahaatee, in 1978, Keele Department of Medicine wadashada furay. Tani waxay cilmi-caafimaad oo la sameeyey iyo waxbarashada caafimaadka postgraduate, laakiin ma baraan ardayda caafimaadka undergraduate. In 2002, ardayda qaar ka mid ah ka School Manchester Medical bilaabay la baray ee Keele. Ugu dambeyntii dugsiga caafimaadka Keele ee u gaarka ah ka furmay 2007.
In 1994, School Oswestry iyo North Staffordshire ee Duugniinka (ONSSP), taas oo ahayd hay'ad gaar ah oo ku salaysan Isbitaalka Robert Jones iyo Agnes Hunt Lafaha ee Oswestry, Shropshire, biirtay University Keele, noqday Keele ee Department of Studies Duugniinka, iyo rarayo ka Oswestry u campus University Keele. Bishii August 1995, University Keele ku biireen North Staffordshire College of Nursing iyo ummulisooyinka, sameynta Dugsiga cusub ee Nursing iyo ummulisooyinka.
In 1998 iyo 1999 waxaa jiray qaar ka mid ah muran badan go'aanka ay maamulka jaamacadda inay iska iibiso Collection Turner ah, ururinta qiimo buugaagta daabacan xisaabeed oo ay ku jiraan qaar ka mid ah oo uu iska lahaa - oo ay si xoogan Buugag by - Isaac Newton, si ay u maal-hagaajinta waaweyn ee maktabadda jaamacadda. Saraakiisha sarsare ee jaamacadda idman iibinta ururinta si iibsadaha ah ee gaarka loo leeyahay, la damaanad lahayn in ay sii joogi doono dhawrsan ama UK gudahood. Inkasta oo sharci ahaan la oggol, iibinta ahaa nacaayo ka mid ah bulshada tacliinta iyo muran la shiday by caymiska jaraa'id negative dheer ku talinaya in qiimaha iibka £ 1m ahaa mid aad u yar yahay iyo in ururinta ahaa qaar la jebiyo.
Sababo la xiriira hoos u caan ah iyo dhaqaale, waaxda Jarmal xiray bishii December 2004, inkastoo jaamacadda ceshan degree physics ay inkastoo mawduuca soo food saartay cadaadis la mid ah.
In 2009, jaamacadda waxaa la guddoonsiiyey Queen ayaa guuradii Abaal Tacliinta Sare oo dheeraad ah, waayo, “horseedka shaqada la NHS ee faragelinta hore iyo daryeelka aasaasiga ah ee lagu daaweeyo xanuunka joogtada ah iyo arthritis, xiriirinaya cilmi gaadhsiinta bukaanka iyada oo shabakadaha GP iyo kooxaha user”.
In 2012 Keele soo bandhigay laba sano aasaas cusub, sanadka aasaaska caalamiga ah iyo sanadkii aasaaska caalamiga ah dedejinta, in lagu daro in dalab ku jira, sida aadanaha, sayniska, social science, caafimaadka, sano aasaaska guud iyo sannadmaaliyadeedka aasaas loogu talagalay dadka aragga.
ballaarinta dheeraad ah oo ku site of jaamacadda ka 2015 ayaa la filayaa in ay keenaan maal-gaarka ah iyadoo la samaynayo xarunta sayniska. Tani waxay keeni lahaa kumanaan shaqo si Staffordshire sidoo kale jaamacadda. In la sameeyo xarun tamarta smart oo doonaysa inay sameeyso il tamarta iyo kor technology cagaaran.
Ma rabtaa wada hadlaan University Keele ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Keele on Map
Photos: Keele University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Keele
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Keele.
jaamacadaha kale ee United Kingdom
Keele University afka
Queen Mary University of London London
Imperial College London London
Jaamacadda Cardiff Cardiff
Heriot-Watt University Edinburgh